ခေါက်သိမ်းနိုင်သောဖုန်းများသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ရှင်သန်ကြသည် Gadget သတင်း
အကယ်၍ သင်သည်ထိုနေရာ၌သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းအခြားအခွံတစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါက်ထားသည့်ဖုန်းတစ်လုံးသည်သင်၏လက်များကိုဖြတ်သန်းသွားပြီဆိုလျှင်ဤအမျိုးအစားဖုန်းအသစ်ကိုကြေငြာတိုင်းအချိန်တိုင်း မင်းကိုကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ခံစားမှုကိုမင်းမှတ်မိလိမ့်မယ် သင်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ရန်သင်ကအသုံးပြုသည့်အခါတိုင်း။ လက်ခုပ်တီး! အေးတယ်
အာရှသည်သုံးစွဲသူသန်းပေါင်းများစွာရှိသောစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖုန်းခေါက်ထားသည့်ဖုန်းများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသော့များမပါသည့်စမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့ပင်ယနေ့တိုင်အစဉ်အဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဈေးကွက်၏သိသိသာသာဝေစုရှိသည်။ ဆမ်ဆောင်းကဒီအကြောင်းကိုသိပြီးအချိန်တိုင်းမော်ဒယ်အသစ်တစ်ခုကိုလွှတ်တင်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့ Samsung Folder2အကြောင်းပြောမယ်.
Samsung Folder2သည် ၃.၈ လက်မမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသေးငယ်။ ဖုန်းခေါက်ထားသည့်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစီမံသည် 425GHz အမြန်နှုန်း quad core နှင့်အတူ Qualcomm Snapdragon 1,4 ပရိုဆက်ဆာနှင့်2GB RAM ပါရှိသည်။ ဖန်သားပြင်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားကင်မရာဖွင့်ရန်၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန်၊ လက်ခံရရှိသည့်အီးမေးလ်များကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ဖုန်းခေါ်ရန်အဆက်အသွယ်များကိုဖွင့်နိုင်သည့်သီးခြားခလုတ်လေးခုပေးထားသည်။
Device ရဲ့အတွင်းဘက်မှာ 16 GB သိုလှောင်မှုနှင့် 1.950 mAh ဘက်ထရီကိုတွေ့ရသည်။ ရှေ့ကင်မရာသည်5mpx ဖြစ်ပြီးနောက်ကင်မရာမှာ 8 mpx ဖြစ်သည်။ The မျက်နှာပြင် resolution 800 × 480 ရှိပြီး Android Marshmallow မှစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ စျေးကွက်ထဲတွင်ရှိပြီးဖြစ်သောဒီ terminal ၏စျေးနှုန်းသည်ပြောင်းလဲရန်ယူရို ၂၄၀ ခန့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်သင်ယင်းကိုကိုင်ထားရန်ရည်ရွယ်ထားပါကသင်၌တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာရှိသည် အာရှနိုင်ငံများသို့ခရီးသွားခြင်း ၎င်းပြင်ပရှိလိုအပ်သည့်နေရာများသည်ဤအပြင်ဘက်မှ ၀ ယ်လိုအားအလွန်နည်းပါးသောကြောင့်ထိုဒေသပြင်ပသို့ရောင်းချရန်ကုမ္ပဏီအားငှားရမ်းခြင်းမရှိပါ။ Samsung သည်ဤ terminal ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရံဖန်ရံခါရောင်းချသည်။ Motorola Razr သည်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်သောအခါ hotcakes များကဲ့သို့ရောင်းချသည့်စက်ပစ္စည်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်စရာရှိသည်။ သင်ရနိုင်တယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Flip phones တွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးရှင်သန်လာကြပါတယ်
ဟဟားဟားလား။ ဒါပေမယ့်အဘယ်သူသည်ထိုအေးမြ 1 ထဲက 10 သူတို့ကိုအသုံးပြု ???